Noocyada baradhada ee taranka NORIKA = kalsoonida helitaanka goosashada wanaagsan! - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
Noocyada baradhada ee taranka NORIKA = kalsoonida helitaanka goosashada wanaagsan!
в Talobixin takhasus leh, Wararka shirkadda, Taranka iyo abuur abuurka
Kala duwanaansho BALTIC
2021, shirkadda "NORIKA-SLAVIA" waxay tijaabisay noocyo kala duwan oo xulashada Norika ee gobollada kala duwan ee dalkeena. In kasta oo xaqiiqda ah in xilli ciyaareedka uu noqday mid aad u adag, waxaan ku faani karnaa natiijooyinka.
Kooxdii hore ee noocyada kala duwan, waxay "ku tartamayeen" midba midka kale Akseniya iyo Passwords.
Akseniya waa noocyo kala duwan oo miis ah, waxay dhigtaa qiyaastii 10-12 digriiga hal geed.
Tilmaamaha wax-soo-saarka ee dhulalka gobolka Bryansk - 36,4 t / hektar ( waraab la'aan ), gobolka Vladimir - 54 t / ha (aan waraabin). Dalagyada waraabka ee gobolka Moosko ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay 103,4 t/ha. Celceliska wax-soo-saarka dhulalka demo waa 51,5 t/ha.
Paroli waa noocyo kala duwan oo miis ah oo jiifa ilaa 10 digriiga hoostiisa baadiyaha cabbirkiisu yahay dhexdhexaad ama weyn. Waxay muujisay inay aad u fiican tahay labadaba dhulalka aan waraabka lahayn: gobolka Vladimir - 51,3 t / ha, gobolka Bryansk - 41 t / ha, iyo waraabka: gobolka Astrakhan - 52 t / ha, gobolka Rostov - 70,4 t / ha, Krasnodar Territory - 52,2 t/ha, Gobolka Moscow - 71,3 t/ha. Celceliska wax-soo-saarka dhulalka demo waa 53 t/ha.
Isku soo wada duuboo, khabiiradu waxay sidoo kale tixgeliyeen sinnaanta iyo boqolkiiba 50 + jajabka qaabdhismeedka dalagga. Celcelis ahaan, Paroli, tirada digriiga waaweyn ee buulku waxay ahayd heerka 79,3%, Akseniya - 76,8%. Laakin rikoodhka tusayaashan ee kooxda hore ayaa ahaa noocyada kala duwan MiaTirada digriiga jajabka 50+ ee qaab dhismeedka dalagga ayaa dhaaftay 90%!
Kooxda dhexe ee hore, noocyada kala duwan ayaa si fiican u shaqeeyay Fideliadulqaadka abaarta. Wax soo saarka: Gobolka Stavropol - 51-61 t / ha, gudaha Krasnodar Territory - 49,2 t / ha, gobolka Rostov - 46 t / ha, gobolka Astrakhan - 49,6 t / ha. Gobolka Tambov, meelaha aan waraabka lahayn - 45 t / hektar.
FIDELIA noocyadeeda kala duwan
Oo halkan waa kala duwanaansho Gala (sidoo kale kooxda dhexe ee hore) ayaa aad u dalbanaysa joogitaanka qoyaanka. Xaaladaha aadka u daran, diiqada dhirta waxaa lagu magdhabay hoos u dhaca bilawga tuberka. Marka, gobolka Sverdlovsk, waxaa jiray kiisas markii kaliya 4-6 digriiga laga sameeyay baadiyaha. Laakiin tani weli waa ka reeban tahay halkii xeerka. Goobta ku taal gobolka Vladimir, wax-soo-saarku wuxuu ahaa 41,4 t / ha, iyo gobolka Astrakhan, natiijada rikoorka ah ayaa la gaaray - 113 t / ha!
Imtixaannada gobollada kala duwan ee dalka ayaa sidoo kale lagu fuliyay noocyo hore oo dhexdhexaad ah Baltic Rose. Wax soo saarka sanadkan: Gobolka Stavropol - 41,2 t / ha, gudaha Krasnodar Territory - 45,4 t / ha, gobolka Rostov - 66,4 t / ha. Gobolka Bryansk, marka la beero waraab la'aan - 50 t / hektar. Gobolka Moscow, laba goobood oo kala duwan, wax-soo-saarku wuxuu ahaa heerka 72 iyo 68 t / ha.
Kooxda ka mid ah noocyada bislaanshaha dhexe, khubarada ayaa kala saaraya Inaru. Had iyo jeer waxay leedahay digriiga quruxda badan - toosan, dhexdhexaad ilaa weyn, oo leh indho yaryar. Iyo wax soo saarka sare: xilli ciyaareedkan ee gobolka Astrakhan - 36,4 t / ha, ee gobolka Vladimir (iyada oo aan waraabka) - 46,7 t / ha, ee gobolka Moscow - 53 iyo 92,2 t / ha, siday u kala horreeyaan. Celceliska wax-soo-saarka dhulalka demo waa 50,4 t/ha.
Dabka BALTIC ee kala duwan
Kala duwanaansho kale oo xilli-dhexe ah - Vega - abaarta u adkaysata, ku haboon beeralayda roobka. Sannadkan, wuxuu isu taagay inuu yahay mid la isku halayn karo, oo si adag u adkaystay imtixaanka xaaladaha cimilada xun. Natiijooyinka soosaarka: gobolka Krasnodar - 66,1 t / ha, gobolka Rostov - 68,4 t / ha, gobolka Astrakhan - laga bilaabo 30,40 ilaa 83,3 t / ha, gobolka Vladimir (iyada oo aan waraabin) - 55,9 t / ha, gobolka Moscow - 67,2 t / ha. Celceliska wax-soo-saarka goobihii bannaanbaxyadu waa 46,3 t/ha.
Kala duwanaansho kale oo ka mid ah kooxda xilliga dhexe - Dabka Baltikada. Waxaa nalagu qasbay inaan ka xanaajino beeralayda baradhada ee xiisaynayay badeecadan cusub: sida uu qabo Komishanka Kala duwanaanta Gobolka, noocyada kala duwan laguma dari doono Diiwaanka Gobolka 2022. Isla mar ahaantaana, Dabka Baltic wuxuu muujiyay natiijooyin aad u wanaagsan inta lagu gudajiro tijaabada ee goobaha demo ee NORIKA-SLAVIA: gobolka Astrakhan, wax-soo-saarka 46 t / ha ayaa la helay, gobolka Moscow - 57,96 iyo 79,4 t / ha , ee gobolka Vladimir (aan waraabka lahayn) - 50,1 t / ha. Digriiga waa weyn yahay, oo ku saabsan 16 xabbo oo ka hooseeya baadiyaha, isku-duubnidu waa wanaagsan tahay - boqolkiiba 50+ jajabka qaab dhismeedka dalagga ayaa gaadhay 85,80%.
Daraasadu waxay muujisay in dhammaan noocyada kala duwan ee xulashada Norika ay si guul leh ula qabsadeen cilladaha sannadkii hore: tilmaamayaasha wax-soo-saarka wanaagsan ayaa la gaaray; tayada sare ee alaabooyinka waxaa lagu xaqiijiyay natiijooyinka falanqaynta tuber ee badeecadaha iyo abuur badan.
Doorashada noocyada baradhada ee taranka NORIKA = kalsoonida helitaanka goosashada wanaagsan!
Sida laga soo xigtay khabiirka, waxaa lagama maarmaan ah in lagu muujiyo ujeedada baradhada ama noocyadeeda kala duwan baakadka.